Uqokwe ngabeSony Music uMfana kaGogo
USIPHO “Mfana Ka Gogo” Mbonambi ozoqopha ngaphansi kweSony Music Africa Isithombe“ INSTAGRAM
Mbali Khanyile | September 22, 2021
UTHOLE ithuba eliyingqayizivele lokuqopha enkampanini yomculo enamagatsha emhlabeni jikelele umculi osemncane odume ngemva kokusabalala kwama-video akhe ezinkundleni zokuxhumana abonakala ecula kuwo.
USipho “Mfana Ka Gogo” Mbonambi ( 17) waseTafelkop eZwelibomvu ngaseMariannhill okumthathe isikhashana ukuzakhela ugazi ngephimbo lakhe kubantu bakuleli, usesayine ngaphansi kweSony Music Africa.
Imenenja yakhe, uMafutha Sokhela, ithe ikholwa ukuthi ukusebenza nalesi sitebele kuzosandisa isibalo sabalandeli bomculo wamapiano
“Sesibheke ngabomvu ukuthi uMfana kaGogo namanye amaciko asebenza nawo akhule ngokukhulu ukushesha emculweni. Kumanje simatasa nokuqedela i- albhamu yakhe (uMfana kaGogo) esikholwa ukuthi izoshubisa kuzo zonke izindawo ngamaholidi kaDisemba. Siyabona enye yezingoma ezizotholakala kwi- albhamu ingena ohlwini lwezingu-10 ezizokuhlukanisa unyaka,” kusho uMafutha obezwakala ejabulile.
Phakathi kwabanye abaculi abangaphansi kweDurban Base Entertainment abaqokwe yilesi sitebele kubalwa uBobo aka Ntombo, Herrah noMhlekzin.
Umqondisi weSony Music Africa, uSean Watson uthe, kuyabajabulisa ukusebenzisana neDurban Base Entertainment futhi babemukela ngezandla ezifudumele abaculi abazosebenzisana nabo.
“Umculo wala maciko esizinike isikhathi siwulalela yiwo osibeke lapha esesikhona namhlanje. Umfutho wethu usukwelinye izinga njengamanje futhi sikholwa ukuthi sizongena kuzwakale kule ndima uma usuqalile umsebenzi esiphezulu kwawo,” kusho uWatson.
UVusi Leeu weH.U.G.E-YEMSWZ esebenzisana ngokubambisana neDurban Base Entertainment, uthe bakuthokezele kakhulu ukuthola ithuba lokwethulela abalandeli bomculo ithalente elisha.
Labaculi abehlelwe yile nhlanhla ngemva kokuthi uMfana kaGogo nethimba abehamba nalo bebe sengozini yemoto ngenkathi besaseGoli ngesonto eledlule, ngenhlanhla abalimalanga, kodwa imoto abebehamba ngayo ishayise yaphela.